UNkulunkulu unguMthombo Wokuphila Wazo Zonke Izinto | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
16 Wezihloko Zobufakazi
Imbewu encane yawela emhlabeni. Ngemva kokuna kwemvula enkulu, imbewu yaveza ihlumela elithambile nezimpande zalo zigqitshwe kancane enhlabathini ngaphansi. Lakhula laba lide ihlumela, imimoya enamandla enonya nemvula, n…
Kwakukhona umfudlana omncane ozombeleza uye uphinde ubuye, ekugcineni ufinyelele ekuqaleni kwentabakazi. Intaba yayivimbe indledlana yomfudlana omncane, ngakho-ke umfudlana wabuza intaba ngezwi lawo elintekenteke, elinca…
Okokuqala, uNkulunkulu wadala umoya ukuze abantu baphefumule. Akuwona yini lo “moya” umoya wokuphila kwansuku zonke lowo abantu abahlala njalo benawo? Ingabe lo moya awuyona into abantu abathembele kuyo sonke isikhathi, …
Into yesibili amazinga okushisa nokubanda. Wonke umuntu uyazi ukuthi ayini amazinga okushisa nokubanda. Amazinga okushisa nokubanda yinto leyo indawo efanele ukuphila abantu okumele ibe nayo. Uma amazinga okushisa ephezu…
Into yesithathu umsindo. Lokhu okunye okufanele ukuthi indawo ejwayelekile ehlala abantu ibe nakho. Umsindo waba khona ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto. UNkulunkulu wawenza kahle kakhulu ngaleso sikhathi. Lokhu y…
Into yesine ehlobene namehlo abantu—ukukhanya. Lokhu kubalulekile. Uma ubona ukukhanya okuxhophayo, bese ukuxhopha kwalokhu kukhanya kufika ezingeni elithile, amehlo akho ngeke abone. Vele, amehlo abantu amehlo enyama. A…
Yini into yesihlanu? Le nto ihlobene kakhulu nempilo yawo wonke umuntu, futhi yinto leyo umzimba womuntu ongeke uphile ngaphandle kwayo kule lizwe elibonakalayo. Le nto ukuhamba komoya. “Ukuhamba komoya” yigama eliqondwa…
Ningabona yini, ngale ndlela enze ngayo kulezi zimo eziyisihlanu eziyisisekelo ekuphileni kwabantu, lokho uNkulunkulu akwenzele isintu? (Yebo) Okusho ukuthi uNkulunkulu udale zonke izimo ezinkulu eziyisihlanu eziyisiseke…
Sikhulume ngengxenye yemvelo yonke, izimo ezidingekayo ukuze umuntu aphile uNkulunkulu azilungiselele isintu njengoba edale umhlaba. Sikhulume ngezinto ezinhlanu, kanti lezi zinto ezinhlanu ziyimvelo yonke. Okulandelayo …
Ekuqaleni, sikhulume ngendawo yokuhlala isintu nokuthi yini uNkulunkuu ayenza, akulungisa, nabhekana nakho kule ndawo, kanjalo nobudlelwano phakathi kwazo zonke izinto uNkulunkulu azilungiselele isintu nokuthi uNkulunkul…
Namuhla ngizokhuluma ngesihloko esithi lezi zinhlobo zemithetho elethwa nguNkulunkulu kubantu nakuzo zonke izinto eziphilayo zimnakekela kanjani umuntu. Empeleni siyini lesi sihloko? Ngesithi zimnakekela kanjani umuntu l…
……Ngenxa yokuthi le mingcele ibekwe nguNkulunkulu, izindawo eziningi ziholele enhlalweni nasempilweni eqhubekayo, kanti le nhlalo nempilo eqhubekayo ibe wusizo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezinyoni kanye nezilwane kwab…
UNkulunkulu wadala konke okuphilayo wabeka imingcele kukho, wayesenakekela zonke izinhlobo zezinto eziphilayo. Ngenkathi konke okuphilayo kunakekela zonke izinhlobo zezinto eziphilayo, Yena futhi walungisa izindlela ezah…
…… Kungani uNkulunkulu eyahlukanise ngale ndlela? Lokhu kubalulekile kubo bonke abantu—kubalulekile impela! UNkulunkulu wehlukanise imikhawulo ngokohlobo lwalokho okuphilayo ngalunye wayimisela ukuba kuqhubeke impilo nga…
…… Okulandelayo, sizokhuluma ngokunye, okuyindlela eyodwa uNkulunkulu alawula ngayo zonke izinto. Lena yindlela, emva kokudala Kwakhe zonke izinto, alinganisa ngayo ukuhlobana kwazo. Lesi ngesinye sezihloko ezibanzi kakh…
Okusanhlamvu, izithelo nemifino, kanye nazo zonke izinhlobo zamantongomane konke kungukudla kwabantu abadla imifino kuphela. Yize kungukudla kwabadla imifino kuphela, kunezakhamzimba ezanele ukwanelisa izidingo zomzimba …